Automation PPC: Teny lakile lasa wild | Martech Zone
Roa volana lasa izay, nandre momba ny orinasa iray izahay manolotra Keywords iray tapitrisa mahery. Nihevitra ny marketing'ny orinasa fa tena milay izany. Marina?
Raha manana tetibola PPC ampy lehibe ny olona iray, inona no mety ho tsy mety amin'ny fiantsoana Keywords marobe? Ny fanamafisana ny lalao Broad, "Fat Head", tsy misy ny teny fanalahidy Negative, ary ny fampiasana tsy mitongilana ny automation / Dynamic Keyword Insertion dia mitarika amin'ny fampisehoana doka tsy mahomby / mampalahelo.
Herintaona lasa izay, raha nanao fikarohana an-tserasera momba ny zazakely iray, ny iray amin'ireo mpanolo-tsaina ao amin'ny PPC dia nahita doka milaza fa "Hamidy na hofan-trano ny mpitaiza!"
Raha ny zavatra niainantsika, ny doka toy izany dia noforonina ho azy avy amin'ny fitaovana izay mamorona Teny lakile miorina amin'ny fikarohana marina sy doka amin'ny ankapobeny. Ka noho izany dia miafara amin'ny Vondrona Ad ianao izay misy Keywords marobe mampihomehy (an'arivony an'arivony, matetika tsy misy ifandraisany) sy ny fampielezan-kevitra PPC izay manaraka ny tsy azo tantanana na hifehezana tsara.
Ireto misy ohatra vitsivitsy farany:
Fikarohana zazalahy niteraka ny tolotra “Discount Boy amidy!” rehefa tena nivarotra fitafiana zazalahy ilay orinasa.
Orinasa mivarotra fantson-drano nipoitra ho an'ny entana mividy fikarohana.
Iray amin'ireo fivarotam-boky amin'ny Internet lehibe indrindra niseho PET. Ratsy kokoa, jereo ny fampisehoana URL. Inona no ifandraisan'ny patio amin'ny biby fiompy, na ny boky?
Ny ohatra toy izany dia mazàna mora hita raha manao fikarohana vitsivitsy amin'ny teny lakile ankapobeny ianao. Avy eo indray, indray mandeha, dia hahazo vatosoa amin'ny fikarohana manokana ianao rehefa tsy antenainao.
Amin'ny lafiny rehetra, fampiasana PPC Automation rehefa mila mitsitsy vola amin'ny mpiasa ianao, fa aza atao amin'ny fandaniam-pahombiazana. Rehefa tsy voatsara tsara ny fampielezan-kevitra PPC dia miatrika izany ianao PPC Keywords Gone Wild.
Marina ny tantara hitanao; ny anaran'ny orinasa ihany no voafafa hiarovana ny tsy mahalala.
Tags: mandeha ho azy dokaautomatiqueteny fanalahidymandeha ho azy dokafikarohana karamamandeha ho azy fikarohana karamappcppc mandeha ho azy